လင်းဦး(စိတ်ပညာ) _ Lin Oo: Auto Messenger Virus Prevention
Auto Messenger Virus Prevention
Virus ကို ကာကွယ်ဖို့​ဆိုပြီး​ Application အ​ကြောင်း​ ​ပြောပြမယ် မထင်ပါနဲ့​။ Messenger Virus ​ခေါ် ထပ်ပွား​ Virus ​တွေ ကူး​စက်မှုကို မိမိကိုယ်တိုင် ကာကွယ်ဖို့​ ​ပြောပြချင်တာပါ။ ​တွေ့​ကြံု​နေရတဲ့​ Google Talk က​နေတစ်မျိုး​၊​ Facebook ချက်​ဘောက်က​နေတစ်ဖုံ လင့်​တွေ ပို့​ပို့​ပြီး​ ဒုက္ခ​ပေး​တာဟာ ​နေ့​စဉ် အင်တာနက်သုံး​သူ​တွေ တစ်ဆင့်​ချင်း​ တစ်​ယောက်ချင်း​စီ ပျံ့​နှံ့​နေတာ ကြာပါပြီ။ ဒီအတွက်လည်း​ Removal Softwares ​တွေထုတ်ပြီး​ ​ဖြေရှင်း​ကြတာမျိုး​။ စက်ထဲက သူတို့​သွား​နိုင်မယ့်​ ​နေရာမှာ ဖယ်ရှား​ရှင်း​လင်း​ပစ်တာမျိုး​တွေ လုပ်ကြပါတယ်။
တကယ်တမ်း​ စဉ်း​စား​ကြည့်​ရင် ဒီ Virus Link ​တွေဟာ ဦး​ဆုံး​ ကူး​စက်ခံရသူရဲ့​ Chat မှတဆင့်​ ထပ်မံ ပို့​ဆောင်ကြတယ်။ Chat List ထဲက သူငယ်ချင်း​တွေကလည်း​ Link ကို ဘာမှန်း​မသိ နှိပ်မိကြတယ်။ ထပ်ပွား​ကြတယ်။
I'm single from India. ASL please ၊​ ဒီ​နောက် Spycam ဆိုပြီး​တစ်မျိုး​၊​ love virus ဆိုပြီး​တစ်ဖုံ၊​ Youtube လင့်​ပေး​ပြီး​ Flash ​ဒေါင်း​ခိုင်း​ပြီး​ ဒုက္ခ​ပေး​တာမျိုး​၊​ HAHA LoL is this your picture? OMG is this your picture? ဆိုပြီး​ Link ​တွေ ​ပေး​ပို့​ပြီး​ ဒုက္ခ​ပေး​မှု ​ပေါင်း​စုံ ဖြစ်​ပေါ်ခဲ့​တယ်။
အဲ့​တော့​ စဉ်း​စား​ကြည့်​ရင် ရှင်း​ရှင်း​လေး​ရယ်ပါ။ ကျွန်​တော်တို့​အား​လုံး​ ဒီလို Messenger Virus ​ခေါ် ထပ်ပွား​ ဗိုင်း​ရပ်​တွေ မထိကြ​အောင် အား​လုံး​မှာ ​စောင့်​ထိန်း​ရမယ့်​ Online Chat စည်း​ကမ်း​လေး​လိုပါတယ်။ ဒီစည်း​မျဉ်း​စည်း​ကမ်း​ကို မလိုက်နာရင်လည်း​ ဘာပြစ်မှုမှလည်း​ မဖြစ်နိုင်သလို တကယ်တမ်း​ အဲ့​လိုသာ လိုက်နာလိုက်ရင် ဒီ Virus ရန်က ကင်း​ဝေး​မှာပါပဲ။
“မိမိက​နေ အခြား​သူငယ်ချင်း​ကို ဖတ်လို​သော Website Link တစ်ခုခု ​ပေး​မယ်ဆိုရင် ဦး​ဆုံး​ ​ခေါင်း​စဉ်/ အ​ကြောင်း​အရာကို ​ပြောပြ​စေချင်ပါတယ်။ ဥပမာ- ဒီ Link က လွတ်လာတဲ့​သူ​တွေအား​လုံး​နဲ့​ ​တွေ့​ဆုံ​မေး​မြန်း​ခန်း​လေး​ပါ- ဆိုပြီး​ ​ပြောပြီး​မှ Link ​လေး​ချ​ပေး​လိုက်တာဟာ အ​ကောင်း​ဆုံး​ပါပဲ။ ဒါမှလည်း​ မိမိသူငယ်ချင်း​ဟာ စိတ်ချလက်ချနဲ့​ Link ကိုနှိပ်ပြီး​ သွား​ကြည့်​နိုင်မှာပါ။”
“​နောက်တစ်ချက်က မိမိသူငယ်ချင်း​တွေဆီမှ Link ​တွေ ​ရောက်လာရင် မ​မေး​ မစမ်း​ပဲနဲ့​ သွား​မနှိပ်မိဖို့​ပါပဲ။ ဒီအတိုင်း​ ဘာမှမ​ပြောပဲ လာတဲ့​လင့်​တွေကို မနှိပ်မိဖို့​ပါ။ ဒီအတိုင်း​ထား​လိုက်ပါ။ အကယ်၍ မိမိသူငယ်ချင်း​က ခုဏက Link ကြည့်​ပြီး​ပြီလား​လို့​ ​မေး​လာမှာပါပဲ။ ဒါဆိုရင် မိမိသူငယ်ချင်း​က သူကိုယ်တိုင် ပို့​တဲ့​ Link တစ်ခုဆိုတာ ​သေချာပြီ​ပေါ့​။”
အထက်ပါ (၂)ချက်ကို ​သေချာစဉ်း​စား​ပြီး​ လူတိုင်း​ လိုက်နာလိုက်ရင် Auto Messenger Virus ရန်​တွေက​နေ ကင်း​ဝေး​နိုင်ပါပြီ။ ကျွန်​တော် အထက်မှာ ​ပြောခဲ့​သလို ဥပ​ဒေသ တစ်ခုမဟုတ်​သော်ငြား​လည်း​ ဒီလို ​စောင့်​ထိန်း​မှု​တွေရှိရင် ဒီလို Virus ရန်မျိုး​တွေက​နေ ကင်း​ဝေနိုင်မှာပါ။
အခုအခါမှာ Twitter လိုမျိုး​မှာ မိမိ​နေ့​စဉ်မှတ်တမ်း​ ​ရေး​တင်တာမျိုး​က​နေအစပြုပြီး​ web short link ​တွေ သုံး​လာကြတယ်။ Google ကလည်း​ goo.gl ဆိုပြီး​ Service ​တွေကို ​ပေး​ထား​ပါတယ်။ အခြား​သော Web short link ​ပေး​တဲ့​ ဆိုက်​တွေလည်း​ ​ပေါ်ထွက်​နေပါပြီ။ တစ်ဖက်က Link အရှည်​တွေကို ချံု့​ပစ်လိုက်တာဟာ ​ကောင်း​ကျိုး​တွေ​ပေး​နေ​ပေမယ့်​ တစ်ဖက်မှာ​တော့​ ဒီ short link ​တွေဟာ ဗိုင်း​ရပ်စ်ဖြန့်​သူ၊​ ဟက်ကာ များ​အတွက် အသုံး​ချစရာ နည်း​လမ်း​သစ်တစ်ခုအဖြစ် ဖန်တီး​ပေး​နေသလို ဖြစ်​နေပြန်ပါတယ်။ သူတို့​ရဲ့​ Virus ထား​ရာ Hosting တစ်ခုခုကို ဒီ Short Link ​တွေကို အသုံး​ပြုပြီး​ ပုံစံ​ပြောင်း​ နှိပ်စက်ပါ​တော့​တယ်။ ဒီအတွက် Short Link ​တွေကိုလည်း​ သတိထား​စေချင်ပါတယ်။
ကျွန်​တော်တို့​တွေဟာ ဒီလို ​စောင့်​ထိန်း​မှုမျိုး​၊​ အ​လေ့​အထမျိုး​လေး​တွေ ရှိသင့်​ပါတယ်။ Antivirus Software ​ပေါင်း​များ​စွာ ထား​ထား​တာပဲကွာလို့​ ​ပြောနိုင်​ပေမယ့်​ တစ်​နေ့​ထက်တစ်​နေ့​ မြင့်​တက်​နေတဲ့​ နည်း​ပညာ​တွေနဲ့​အတူ ဒီ Software ​တွေ မသိလိုက်တဲ့​ Virus အမျိုအစား​တွေ များ​စွာ​ပေါ်ထွက်​နေဦး​မှာပါပဲ။ တစ်ချို့​ Virus များ​ဆိုရင် Antivirus Software က သတ်လိုက်တယ်လို့​ ပြ​နေ​ပေမယ့်​ မိမိကွန်ပျူတာစက်ထဲကို ​ရောက်ပြီး​ပြီဆိုတာမျိုး​တွေ ရှိ​နေတတ်ပါတယ်။
ကာကွယ်ခြင်း​ဟာ ကုသခြင်း​ထက် ​ကောင်း​ပါတယ် ဆိုတာနဲ့​အညီ ကျွန်​တော်တို့​ဟာ ဒီလိုမျိုး​လေး​တွေ ​ရှောင်ကြဉ်လိုက်ရင် ဒီလို Virus မျိုး​တွေက​နေ ကင်း​ဝေနိုင်မယ်လို့​ အကြံပြုပါရ​စေ။
By လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on at Sunday, January 15, 2012
​ဒီ​ပို့စ်​လေး​ကို ​အ​ရင်​က​တည်း​က ​ဖတ်​ထား​မယ်​ဆို​ရင် ​ခု​လို​ဖြစ်​မှာ​မ​ဟုတ်​ဘူး​။​ ​ဖြစ်​ချင်​တော့​ ​သူငယ်​ချင်း​တစ်​ယောက်​နဲ့​စ​ကား​​ပြော​နေ​တာ..​၊​ ​သူ့​ဆီ​က ​လင့်​ဝင်​လာ​တော့​ ​သူ​ပို့​တယ်​ပဲ​ထင်​တာ​ပေါ့​။​ ​အဲ​ဒါ​ကြောင့်​ ​သွား​နှိူပ်​လိုက်​မိ​တာ..​။​ ​မ​နမ်း​ရဲ့​ ​ကွန်​ပျူ​တာ​လေး​ထဲ​က ​ဗိုင်း​ရပ်စ်​ကို ​ရှင်း​​ပေး​တဲ့​အ​တွက်​လည်း​ ​ကို​လင်း​ဦး​ကို​ကျေး​ဇူး​တင်​ပါ​တယ်​ရှင်..​။​
January 15, 2012 at 7:22:00 PM GMT+6:30
ဟုတ်​ကဲ့​ပါ... ​မနမ်း​​ရေ... ​ရေး​မယ် ​ရေး​မယ်​နဲ့​ ​အ​ခု​မှ ​ရေး​ဖြစ်​သွား​လို့​ပါ​။​
January 15, 2012 at 7:35:00 PM GMT+6:30